कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कहिलेसम्म ? यस्तो छ देउवा र प्रचण्डको योजना - Deshko News Deshko News कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कहिलेसम्म ? यस्तो छ देउवा र प्रचण्डको योजना - Deshko News
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कहिलेसम्म ? यस्तो छ देउवा र प्रचण्डको योजना
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।